ပုံတဈပုံခငျြးဆီကို သခြောကွညျ့ပါ။ ဘယျပုံကို ပထမဆုံး မွငျတယျဆိုတာကို ရိုးရိုးသားသားပွောပွပါ။ သငျ့ရဲ့လတျတလောခံစားခကျြဘယျလိုရှိတယျဆိုတာကို ကြှနျတျောပွောပွပါမယျ။
ဒီပုံကိုကွညျ့ရငျ သငျဘယျအရာကို ပထမဆုံး မွငျပါသလဲ (၁) မိကြောငျး (၂) လှတေစငျး
သငျသာ မိကြောငျးတဈကောငျကို ပထမဦးဆုံးမွငျခဲ့မယျဆိုရငျ -
ဆိုလိုတာက သငျက ပိုပွီးကွီးမားတဲ့ရုပျပုံမြားကို ကွညျ့တတျသူတဈဦးပါ။ သငျဟာ အာရုံစူးစိုကျနိုငျပွီး အလှနျလကျတှကေ့တြဲ့လူတဈဦးပါ။ အမြားကွီး စှနျ့စားမှုတှကေို မကွိုကျနှဈသကျပါဘူး။ အရာရာကိုသတိထားပွီး အတှအေ့ကွုံအသဈတှကေို မကွိုကျနှဈတဲ့ လူတဈဦးပါ။
သငျသာ လှတေဈစငျးကို ပထမဦးဆုံးမွငျခဲ့မယျဆိုရငျ -
ဆိုလိုတာကတော့ သငျဟာ အသေးစိတျအခကျြအလကျမြားကို စိတျဝငျစားသူပါ။ ထူးခွားတဲ့ဖနျတီးမှုရှိသူတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။ အရာရာကို အသေးစိတျအာရုံစိုကျနတေတျသူတဈဦးဖွဈလို့ တဈခါတဈရံမှာ အခွားအရာတှေ၊ တာဝနျတှကေို မလြေ့ော့နတေတျပါတယျ။
ဒီပုံကိုကွညျ့တဲ့အခါ တိုငျလုံးတှကေို ဦးစှာမွငျတယျဆိုရငျတော့ -
သငျဟာ နှဈသိမျ့မှုနဲ့ လုံခွုံမှုကို နှဈသကျကွောငျး ညှနျပွနပေါတယျ။ သငျဟာ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျမြားအပျေါ အလှနျအမငျး အိပျမကျမကျနခွေငျးနဲ့ ဒီအိပျမကျမြားအပျေါ အမှနျတကယျ အကောငျအထညျဖျောရနျအတှကျ အခြိနျမလုံလောကျခွငျးအပျေါ အာရုံစူးစိုကျသော လက်ခဏာရှိသညျ။
လူပုံတှကေို ပထမဦးဆုံးမွငျတယျဆိုရငျတော့ -
သငျဟာခံစားခကျြလှတျလပျတဲ့သူတဈယောကျပါ။ သငျ့ဆီမှာ မယုံနိုငျလောကျတဲ့သူတှနေဲ့ပတျသကျပွီး စှနျ့စားခနျးတှေ ပွညျ့နပေါတယျ။
ဒီပုံမှာ အသကျကွီးတဲ့လူတဈယောကျကို သငျမွငျတယျဆိုရငျတော့ -
သငျဟာ အခွားသူမြားအပျေါ အလှနျစာနာတတျသော နူးညံ့သိမျမှသေ့ော စိတျသဘောထကျ ပိုသညျဟု ဆိုလိုပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတာတော့ မငျးက အသကျကွီးတဲ့လူကို ဦးစှာမွငျလို့ပါပဲ။ မငျးရဲ့ညာဘကျဦးနှောကျကို ပိုမိုအသုံးပွုတဲ့လူတဈယောကျဆိုတာကို ညှနျပွနတောပါပဲ။
သငျက အမြိုးသမီးတဈဦးပုံကို ဦးစှာမွငျခဲ့တယျဆိုရငျတော့ -
သငျဟာ ခှဲခွမျးစိတျဖွာမှုနှငျ့ စဉျးစားတှေးချေါတှကျဆမှု ပိုမြားပါတယျ။ သငျ့ဦးနှောကျရဲ့ ဘယျဘကျခွမျးကို ပိုပွီးအသုံးပွုတဲ့လူတဈယောကျပါ။ လုပျငနျးတဈခုခုကို လကျတှကေ့ကြ ကွိုးစားရနျအားထုတျနသေညျ့အခါမှာ သငျဟာ အေးစကျတဲ့နှလုံးသားပိုငျရှငျပါ။
သငျဟာလှတျလပျမှုကိုမွတျနိုးသူ၊ ခရီးသှားရတာကိုနှဈသကျသူတဈဦးပါ။ စှနျ့စားမှုကို အလှနျအမငျးနှဈသကျတဲ့ လူတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။
သငျဟာ ခှဲခွားစိတျဖွာတတျတဲ့လူတဈဦးပါ။ သငျဟာ ကွီးမားတဲ့ရုပျပုံလှာကို ပိုမိုအာရုံစိုကျပွီး အသေးစိတျအခကျြအလကျမြားကို လဈြလြူရှုထားတတျပါတယျ။
“A” က ဒီပုံမှာပထမဆုံးတှဖေို့အခကျခဲဆုံးပါ။ အကယျ၍ သငျဟာ “A” ကို ဦးစှာမွငျခဲ့တယျဆိုရငျ လငျးယုနျမကျြစိရှိတဲ့သူတဈယောကျလို့ ဆိုရပါလိမျ့မယျ။ သငျဟာ အခွားသူမြားသတိမပွုမိသော သိမျမှသေ့ောအကွောငျးအရာမြားကို သိရှိနိုငျတဲ့လူတဈယောကျပေါ့။
ဒီပုံမှာ ဦးခေါငျးခှံတဈခုကို ဦးစှာမွငျခဲ့တယျဆိုရငျ -
သငျဟာ ဆုံးဖွတျခကျြမြားခရြနျ၊ ရှသေို့လမျးကွောငျးတဈခုခုကိုရှေးခယျြရနျ ခကျခဲသော လက်ခဏာရှိသူဖွဈပါတယျ။
သငျ့မှာခုခံကာကှယျမှုတှမြေားနတေဲ့လူတဈဦးပါ။ ဓာတျပုံထဲမှာပါတဲ့အမြိုးသမီးက မွပေျေါလှဲခနြပွေီး ခေါငျးပျေါမှာလကျကိုတငျကာ သူမရဲ့ရငျခှငျထဲမှာ ဖုံးအုပျနတေယျ။ သူမက အလှနျခုခံကာကှယျနသေော အနအေထားမှာရှိနပေါတယျ။ ရုပျပိုကျဆိုငျရာနဲ့စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ထိခိုကျမှုမြား ခံစားနရေသူပါ။ မိမိကိုယျကိုယုံကွညျမှုရှိဖို့ ကွိုးစားရပါလိမျ့မယျ။
ကဲ သငျရော ဒီပုံလေးတှမွေငျပွီး ဘယျလိုတှမွေငျလညျး???
ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီး လတ်တလော သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ဖော်ထုတ်ကြည့်ရအောင်
ပုံတစ်ပုံချင်းဆီကို သေချာကြည့်ပါ။ ဘယ်ပုံကို ပထမဆုံး မြင်တယ်ဆိုတာကို ရိုးရိုးသားသားပြောပြပါ။ သင့်ရဲ့လတ်တလောခံစားချက်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။
ဒီပုံကိုကြည့်ရင် သင်ဘယ်အရာကို ပထမဆုံး မြင်ပါသလဲ (၁) မိကျောင်း (၂) လှေတစင်း
သင်သာ မိကျောင်းတစ်ကောင်ကို ပထမဦးဆုံးမြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် -
ဆိုလိုတာက သင်က ပိုပြီးကြီးမားတဲ့ရုပ်ပုံများကို ကြည့်တတ်သူတစ်ဦးပါ။ သင်ဟာ အာရုံစူးစိုက်နိုင်ပြီး အလွန်လက်တွေ့ကျတဲ့လူတစ်ဦးပါ။ အများကြီး စွန့်စားမှုတွေကို မကြိုက်နှစ်သက်ပါဘူး။ အရာရာကိုသတိထားပြီး အတွေ့အကြုံအသစ်တွေကို မကြိုက်နှစ်တဲ့ လူတစ်ဦးပါ။
သင်သာ လှေတစ်စင်းကို ပထမဦးဆုံးမြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် -
ဆိုလိုတာကတော့ သင်ဟာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စိတ်ဝင်စားသူပါ။ ထူးခြားတဲ့ဖန်တီးမှုရှိသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အရာရာကို အသေးစိတ်အာရုံစိုက်နေတတ်သူတစ်ဦးဖြစ်လို့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အခြားအရာတွေ၊ တာဝန်တွေကို မေ့လျော့နေတတ်ပါတယ်။
ဒီပုံကိုကြည့်တဲ့အခါ တိုင်လုံးတွေကို ဦးစွာမြင်တယ်ဆိုရင်တော့ -
သင်ဟာ နှစ်သိမ့်မှုနဲ့ လုံခြုံမှုကို နှစ်သက်ကြောင်း ညွှန်ပြနေပါတယ်။ သင်ဟာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များအပေါ် အလွန်အမင်း အိပ်မက်မက်နေခြင်းနဲ့ ဒီအိပ်မက်များအပေါ် အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် အချိန်မလုံလောက်ခြင်းအပေါ် အာရုံစူးစိုက်သော လက္ခဏာရှိသည်။
သင်ဟာခံစားချက်လွတ်လပ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သင့်ဆီမှာ မယုံနိုင်လောက်တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စွန့်စားခန်းတွေ ပြည့်နေပါတယ်။
ဒီပုံမှာ အသက်ကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ကို သင်မြင်တယ်ဆိုရင်တော့ -
သင်ဟာ အခြားသူများအပေါ် အလွန်စာနာတတ်သော နူးညံ့သိမ်မွေ့သော စိတ်သဘောထက် ပိုသည်ဟု ဆိုလိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာတော့ မင်းက အသက်ကြီးတဲ့လူကို ဦးစွာမြင်လို့ပါပဲ။ မင်းရဲ့ညာဘက်ဦးနှောက်ကို ပိုမိုအသုံးပြုတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတာကို ညွှန်ပြနေတာပါပဲ။
သင်က အမျိုးသမီးတစ်ဦးပုံကို ဦးစွာမြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ -
သင်ဟာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် စဉ်းစားတွေးခေါ်တွက်ဆမှု ပိုများပါတယ်။ သင့်ဦးနှောက်ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းကို ပိုပြီးအသုံးပြုတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို လက်တွေ့ကျကျ ကြိုးစားရန်အားထုတ်နေသည့်အခါမှာ သင်ဟာ အေးစက်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ပါ။
သင်ဟာလွတ်လပ်မှုကိုမြတ်နိုးသူ၊ ခရီးသွားရတာကိုနှစ်သက်သူတစ်ဦးပါ။ စွန့်စားမှုကို အလွန်အမင်းနှစ်သက်တဲ့ လူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ ခွဲခြားစိတ်ဖြာတတ်တဲ့လူတစ်ဦးပါ။ သင်ဟာ ကြီးမားတဲ့ရုပ်ပုံလွှာကို ပိုမိုအာရုံစိုက်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို လျစ်လျူရှုထားတတ်ပါတယ်။
“A” က ဒီပုံမှာပထမဆုံးတွေ့ဖို့အခက်ခဲဆုံးပါ။ အကယ်၍ သင်ဟာ “A” ကို ဦးစွာမြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် လင်းယုန်မျက်စိရှိတဲ့သူတစ်ယောက်လို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာ အခြားသူများသတိမပြုမိသော သိမ်မွေ့သောအကြောင်းအရာများကို သိရှိနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ့။
ဒီပုံမှာ ဦးခေါင်းခွံတစ်ခုကို ဦးစွာမြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် -
သင်ဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်၊ ရှေ့သို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ရန် ခက်ခဲသော လက္ခဏာရှိသူဖြစ်ပါတယ်။
သင့်မှာခုခံကာကွယ်မှုတွေများနေတဲ့လူတစ်ဦးပါ။ ဓာတ်ပုံထဲမှာပါတဲ့အမျိုးသမီးက မြေပေါ်လှဲချနေပြီး ခေါင်းပေါ်မှာလက်ကိုတင်ကာ သူမရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ဖုံးအုပ်နေတယ်။ သူမက အလွန်ခုခံကာကွယ်နေသော အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ ရုပ်ပိုက်ဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများ ခံစားနေရသူပါ။ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့ ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။
ကဲ သင်ရော ဒီပုံလေးတွေမြင်ပြီး ဘယ်လိုတွေမြင်လည်း???